Zidane oo ugu baaqay Real Madrid inay sameeyaan saxiixa mucjisada kooxda Juventus – Gool FM
Zidane oo ugu baaqay Real Madrid inay sameeyaan saxiixa mucjisada kooxda Juventus
(Madrid) 28 Maajo 2019. Kooxda Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay si xoogan u gasho suuqa kala iibsiga si ay kaga soo kabato xili ciyaareedkii foosha xumaa ay soo qaadatay, kaasoo laga reerbay dhamaan tartamada maxaliga ah iyo kuwa Yurub.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu qorsheenayaa inuu lasoo saxiixdo badalka xiddiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba, wuxuuna macalinka reer France doonayaa inuu u dhaqaaqo soo xero galinta mid ka mid ah xiddigaha ugu fiicnaa booskiisa ee khadka dhexe sanadihii lasoo dhaafay.
Zidane ayaa dooqa koowaad ka dhiganaya Pogba si uu ugu xoojisto khadkiisa dhexe, laakiin heshiiskiisa ayaa noqday mid aad u adag maadaama maamulka kooxda Manchester United ay diidan yihiin inay iska fasaxaan adeega laacibkoodan, waxayna doonayaan inay qandaraaska u kordhiyaan si uu u sii joogo garoonka Old Trafford.
Hadaba Sida laga soo xigtay shabakada “Le 10 Sport” Zinedine Zidane ayaa ka codsaday maamulka Los Blancos inay u sameeyaan saxiixa xiddiga kooxda Juventus ee Miralem Pjanić, hadii ay dhacdo inay ku fashilmaan heshiiska Pogba.
Sida ay wararku sheegayaan ka tagista Miralem Pjanić ee kooxda Juventus ayaa ka fudud marka loo fiiriyo ka tagista Paul Pogba ee kooxda Manchester United, iyadoo sidoo kale heshiiska laacibka reer Bosnia aysan kaga bixi doonin Los Blancos qarashaad badan.
Hazard oo si dadban u sheegay inuu ka tagayo Chelsea kaddib ciyaarta finalka koobka Europa League
Xiriirka Kubadda Cagta Brazil oo go'aan ka gaaray Neymar Jr, maalmo kahor bilaawashada Copa America